Jawaab Degdeg ah: Sida Loo Joojiyo Uumi-baxa Biyaha ee Haanta Kaluunka - Baaskiil Baaskiil
Bogga ugu weyn » Kaladuwan » Jawaab Degdeg ah: Sida Loo Joojiyo Uumi-Biyaha Haanta Kalluunka
Sideen uga joojin karaa biyaha ku--Aquarium-ka inay uumi-baxayaan?
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in biyuhu ku soo baxaan haanta kalluunka?
Sideed u xasilisaa biyaha haanta kalluunka?
Waa maxay sababta haanta kalluunkaygu si degdeg ah u uumi baxayo?
Waa maxay sababta haanta kalluunkayga ay u lumiso biyo aad u badan?
Biyo ma ku dari karaa haanta kalluunkayga?
Ma ku dari karaa qaboojiyaha biyaha inta kalluunka uu ku jiro haanta?
Miyaan daboolaa haanta kaluunka habeenkii?
Heerkulkee ayay tahay in haanta kalluunka ay noqoto?
Sidee ugu dari kartaa biyaha haanta kalluunka ka dib markaad nadiifiso?
Intee in le'eg ayay tahay in heerka biyuhu uu ahaado haanta kalluunka?
Immisa jeer ayaan ku beddelaa biyaha haanta kalluunka?
Sideen u ilaalin karaa haanta kalluunkayga mid caafimaad qaba?
Goorma ayay tahay inaad marka hore baddasho biyaha?
Ma bedeli kartaa biyaha aquarium marar badan?
Sideen ku ogaan karaa in haanta kalluunkaygu ay faraxsan tahay?
Sideed ula dhaqantaa biyaha haanta?
Sideed ula dhaqantaa biyaha kalluunka?
Sidee bay u xun yihiin biyaha tuubada kalluunka?
Intee jeer ayay tahay in la quudiyo kalluunka?
Intee in le'eg ayay tahay inaad sugto ka hor intaadan ku darin kalluun badan?
Ka ilaalinta haanta kalluunka qabow Ka ilaali aquarium-kaaga daaqadaha qoraxda leh oo dhig meel qabow oo qolka ah. Soo qaado dabool haanta si aad u ilaaliso uumiga ugu yaraan. Haddii aad dejinayso haan cusub, dooro mid leh bedka sare ee ka yar. Isticmaal nalalka kulaylka hooseeya sida LED-yada oo ha ka tagin nalka taangiga mar kasta.
Uumi-baxa dhaqdhaqaaqa hawadu hoos ayuu u dhacaa marka qoyaanka hawada ee ka sarreeya biyaha kor u kaca. Taasi waa sababta ku darista daboolka dhalada haantaada waxay yaraynaysaa heerka uumiga. Lakabka uumiga ee u dhexeeya dusha biyaha iyo daboolka muraayadda ayaa adkeynaya uumiga inuu dhaco.
Chlorine oo ah heerka 2ppm (qayb halkii milyan) qiyaastii 10 gallon oo biyo ah waxay qaadan doontaa ilaa 110 saacadood inay gebi ahaanba uumibaxdo. Waxaa muhiim ah in la ogaado in xaaladaha qaarkood sida iftiinka ultraviolet, hawada, iyo wareegga saxda ah ay soo dedejin doonaan habka uumiga.
Ku buuxi taangigaaga qiyaastii saddex meelood meel meel ka buuxo biyaha heerkulka qolka baaldi nadiif ah. Ku shubista biyaha saxan ama suugo ku fadhida quruuruxda waxay caawinaysaa in quruuruxdu meesheeda dhigto. Ku dar qaboojiyaha biyaha, sida Tetra® AquaSafe® Solution, si aad koloriinta uga saarto biyaha. Chlorine ayaa kuu fiican adiga, maaha kalluunkaaga!.
Uumi-baxa haanta kalluunka waa caadi; si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo loo yareeyo. Kulaylku waa sababta ugu weyn ee uumiga biyaha, markaa kulaylka yar, ayaa ka sii wanaagsan. Kuleylka badan ma aha oo kaliya in biyuhu ay dhaqso u baxaan, laakiin sidoo kale waxay sababtaa in dheef-shiid kiimikaad ee kalluunkaagu uu dedejiyo, ku daro sunta taangiga oo culays saaraya kalluunka.
Heerka biyaha ee aquarium-kaaga ayaa isbedeli doona. Inta badan kiisaska hoos u dhaca heerka biyaha ayaa ah uumi-bax, badanaa waxaa sababa kulaylka sarreeya ee cimilada kulul. Haddii aad leedahay aquarium sare oo furan ka fiirso inaad isticmaasho saxanka uumiga xagaaga si aad u yarayso khasaaraha biyaha.
Ku buuxi baaldi nadiif ah qiyaastii saddex-meelood laba ilaa saddex-meelood afar meelood oo ay ka buuxaan biyo. Si tartiib ah ugu shub biyaha baaldiga ku dheji saxanka ku yaal aquarium-ka. Ku celi tillaabooyinka lixaad iyo toddoba ilaa taangiga ay kala badh ka buuxsamaan biyo. Ku dar dhirta iyo qurxinta.
Waxaad ku dari kartaa qaboojiyaha biyaha oo kalluunka ku jira haddii aad kaliya ka saarayso qayb yar oo biyo ah. Haddii aad gabi ahaanba bedesho biyaha, waxaad u baahan tahay inaad ku darto qaboojiyaha biyaha ka hor intaadan ku darin kalluunka si looga fogaado in kalluunka lagu sumeeyo koloriin, chloramine, ama ammonia.
Haddii aad leedahay kalluun soo booda, waxaa lagugula talinayaa inaad daboosho haantaada, maaha kaliya habeenkii laakiin sidoo kale maalintii. Marka laga reebo taas, daboolka haanta kalluunkaaga ayaa kaliya lama huraan ah habeenkii gudaha qolka aquarium halkaas oo heerkulka deegaanku uu aad u sarreeyo si uu biyaha si weyn u uumibixiyo.
Marka laga reebo noocyada biyaha qabow qaarkood, kalluunka aquarium-ka badankoodu wuxuu u baahan yahay biyo diirran. Bettas, discus iyo noocyada kale qaarkood waxay ku fiican yihiin biyaha u dhexeeya 76 ° iyo 85 ° F, inta badan kalluunka kale ee kulaylaha ayaa door bida qiyaasta 75 ° iyo 80 ° F, iyo kalluunka dahabka ayaa ugu fiican 68 ° ilaa 74 ° F.
Kadib markaad dhameysato nadiifinta haantaada, waxaad ku buuxin kartaa haanta biyo cusub. Hubi in biyaha cusub ee aad ku shubtay haanta ay hore u soo saareen koloriinta iyadoo la isticmaalayo daawaynta qaboojinta. Tani waa marka kaliya ee ay tahay inaad biyo ku darto haanta kalluunka.
Guud ahaan waa inaad buuxisaa haanta ilaa inch ka hooseysa gooynta sababtoo ah tiirka biyaha iyo habka hawada ayaa abuuri doona xumbo soo daadiya oogada. Marka khadka biyuhu uu aad u sarreeyo, biyuhu waxa laga yaabaa inay ku daataan meel ka baxsan haanta.
Waa inaad samaysaa 25% isbeddel biyo labadii ilaa afartii toddobaadba mar. Ma jirto sabab looga saaro kalluunka inta lagu jiro isbeddelka biyaha. Hubi in aad walaaqdo quruurux ama isticmaal quruurux nadiifiye inta lagu jiro isbeddelka biyaha. Markaad biyaha dib ugu darto aquarium-ka, isticmaal Tetra AquaSafe® si aad uga saarto chlorine iyo chloramine.
10 Talo oo Muhiim ah si aad u ilaaliso Aquarium caafimaad leh Si sax ah u hagaaji biyahaaga. Ku dar kalluunkaaga biyaha. Ku sabbeeyaan kalluunka shandaddooda. Ilaali dheelitirnaanta pH iyo heerarka kale ee kiimikaad. Hubi in heerkulka biyuhu uu sax yahay. Si joogto ah u beddel biyaha. Muraayadaha haanta nadiifka ah iyo dhismayaal kale. Dooro cabbirka saxda ah ee taangigaaga.
Samee 25% isbeddel biyo ah 15 maalmood ka dib. Xusuusnow inaad ku daaweyso biyaha tuubada Aqueon Water Conditioner ka hor intaadan ku darin aquarium-kaaga. Waxaa jira falsafado kala duwan oo ku saabsan inta iyo inta jeer ee la beddelo biyaha, laakiin 10% ilaa 25% 1 ilaa 2 toddobaad kasta waa xeer wanaagsan oo suulka.
Si loo soo gabagabeeyo, haa waxaad samayn kartaa isbeddelo badan oo biyo ah. Haddii aad sameyso wax ka badan 1 isbeddel biyo ah maalintii, kalluunkaagu wuxuu la kulmi doonaa cadaadis aan loo baahnayn. Tani waa sababta oo ah cabbirada biyuhu waa isbedelayaan. Weligaa ha beddelin in ka badan 50% biyaha hal mar, sababtoo ah tani waxay dili kartaa bakteeriyada faa'iidada leh ee ku jirta aquarium-ka.
Guud ahaan, soo socda ayaa ah qaar ka mid ah siyaabaha aad ku ogaan karto haddii kalluunkaagu faraxsan yahay. Waxay dib iyo dib ugu dabaashaan si xor ah oo tamar leh hareeraha haanta. Si la mid ah bini'aadamka, kalluunka faraxsan ayaa laga yaabaa inuu dhalaal firfircoon ku yeesho maqaarkooda. Uma muuqdaan kuwo ka baqaya kalluunka kale ee taangiga ku jira. Si caadi ah ayay u neefsanayaan.
Haddii wasakhda la kiciyay, biyaha waxaa lagu daweyn karaa kiimiko leh koloriin iyo/ama la kariyey ka hor intaan la isticmaalin. Habka ugu fiican waa in la haysto laba taangi oo si beddel ah loo nadiifiyo. Hababka kale ee daaweynta biyaha ayaa sidoo kale la isticmaali karaa, sida jeermiska ka-hortagga iftiinka ultraviolet (UV) ama sifaynta.
Beddel 10% biyaha aquarium-kaaga toddobaad kasta ama 25% labadii toddobaadba mar. Beddelka biyaha waa inuu ahaadaa heer kul la mid ah biyaha quraaradda. Had iyo jeer ku dawee biyaha tuubada qaboojiyaha biyaha si aad uga takhalusto chlorine iyo ammonia ka hor intaadan ku darin aquarium-ka. Beddel kartoonnada shaandhada ugu yaraan hal mar bishii.
Biyaha qasabada ee caadiga ah waxay ku fiican yihiin buuxinta aquarium-ka ilaa iyo inta aad u ogolaanayso inay fadhiistaan ​​maalmo badan ka hor intaadan ku darin kalluunka (koloriinta ku jirta biyaha tuubada ayaa dili doonta kalluunka). Waa fikrad wanaagsan in filtarka loo daayo in uu socdo toddobaad ka hor inta aan kalluunka lagu darin haanta.
Inta badan, quudinta kalluunkaaga hal ama laba jeer maalintii ayaa ku filan. Hiwaayadaha qaarkood ayaa xitaa sooma kalluunkooda hal ama laba maalmood usbuucii si ay ugu oggolaadaan inay nadiifiyaan hab-dhiska dheefshiidka. Kalluunka weyn, ee fadhiga badan wuxuu socon karaa waqti dheer inta u dhaxaysa cuntada marka loo eego kalluun yar oo firfircoon.
Waxaad guud ahaan dooneysaa inaad sugto ugu yaraan laba toddobaad inta u dhaxaysa soo bandhigida waxyaabo cusub oo lagu daro haanta kalluunkaaga. Tani waxay siinaysaa wakhti shaandhada bayoolojigu mar kale la qabsado. Waqtigaan wuxuu sidoo kale u ogolaanaya kalluunka cusub inuu la qabsado haanta kalluunka, iyo kalluun ka sii weyn, oo sii dhisan si uu ula qabsado waxyaabaha cusub ee lagu daro haanta kalluunkaaga.
Su'aal: Sida Loo Joojiyo Uumi-biyoodka Haamaha Kalluunka
Qaboojiyaha Haanta Kalluunku Ma Ka Dhigi Karaa Biyaha Haamaha Mid Murugo Leh
Su'aal: Intee in le'eg ayay beddeshaa haanta kalluunka biyaha
Intee In le'eg oo Biyuhu Bedelayaan Haanta Kaluunka
Sida Loo daweeyo Biyaha Haamaha Kalluunka
Sida Loo Faarujiyo Biyaha Haamaha Kalluunka
Su'aal: Sida Loo Sifeeyo Biyaha Haamaha Kaluunka
Jawaab degdeg ah: Kalluunku ma yeelan karaa haanta biyaha
Su'aal: Ma Isticmaali Kartaa Haanta Kalluunka Biyaha Jilcisa Biyaha
Intee In le'eg ayaa qaboojiyaha Biyaha ee Haanta Kaluunka
Su'aal: Immisa Amoxicillin Kalluunka Haanta Aquarium Biyaha
Intee In le'eg oo Biyo ah Haanta Kalluunka